နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ နေစရာရရှိရေး ဘ၀တူအချင်းချင်းကူညီ | Hotnews Weekly Journal
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ နေစရာရရှိရေး ဘ၀တူအချင်းချင်းကူညီ
Tuesday, February 13, 2018 - 11:45
အမှန်တကယ် ခိုကိုးရာမဲ့နေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ နေထိုင်ရေးအတွက် မြေနေရာများ ၀ယ် ယူရန်တိုက်ကြီးမြို့နယ်BG သွေးအကူ အညီပေးရေးအဖွဲ့နှင့် အဖြူရောင်လက် များ ပရဟိတအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖေဖော် ၀ါရီ ၁၂ ရက်တွင် တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ရွှေဂျိုးဖြူခန်းမ၌ အခမဲ့စင်တင်တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပပြီး အလှူငွေများ ကောက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခိုကိုးရာမဲ့သူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားဟောင်းများကို မြေကွက်နှင့် အိမ် များ ပေးဝေသွားနိုင်ရန် နှလုံးသားချင်း တူသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း များ၏အားကို အများအပြား လိုအပ် ကြောင်း သိန်းတစ်ရာ မတည်၍ မြေသုံး ဧက၀ယ်ယူထားသည့် BG သွေးအကူ အညီပေးရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးသက် ဦးက ပြောသည်။
““နိုင်ကျဉ်းတွေထဲမှာ စီးပွားရေး ပြေ လည်သူလည်း ရှိတယ်။ မပြေလည်သူ လည်းရှိတယ်။ အများစုကတော့ မပြေ လည်ကြပါဘူး။ သူတို့အတွက် ကျွန်တော် တို့ နှလုံးသားတူတဲ့ သူတွေစုမိပြီးတော့ ဒီအတွေးလေးကိုရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေရာတစ်ခု ဖန်တီးမယ်။ တကယ် ခိုကိုးရာမဲ့တဲ့ နိုင်ကျဉ်းတွေကလည်း ၀ိုင်း ၀န်းကြပါလိမ့်မယ်။ မကြာခင်မှာ ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင် ကော်မတီဖွဲ့ပါ မယ်။ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲလေးက ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းလောင်းတီးလိုက် တာပါပဲ။ အစိုးရအပါအ၀င် နားလည်မှု ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို ခေါင်းလောင်းတီး လိုက်တာပါ။ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ကျွန် တော်တို့နဲ့ ဘ၀ချင်းတူတဲ့သူတွေ အများ ကြီးရှိပါတယ်။ ဘ၀တွေတော့ တူခဲ့ကြ တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ နားလည်မှုရော ဘယ်လောက်အထိ တူညီနိုင်မလဲ နှလုံး သားချင်းတူတဲ့ နိုင်ကျဉ်းတွေရဲ့ အားကို အများကြီး လိုပါတယ်”” ဟု ဦးသက်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းအစီအစဉ်ကို ၀ါးရုံပင် ဖောင် ဒေးရှင်း၊ သာယာဝတီထောင် နိုင်ကျဉ်း ဟောင်းများ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုအဖွဲ့၊ 5J Club နှင့် အဖြူရောင်လက် များ ပရဟိတအဖွဲ့တို့ကလည်း ပူးပေါင်း ကူညီလျက်ရှိပြီး မြေနေရာများ ၀ယ်ယူ ရာတွင် တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြ ကြောင်း၊ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေ ဖြင့် ဦးသက်ဦး (ဖုန်း-၀၉၅၀၂၈၃၀၀)၊ ဦးကိုကိုအောင် (ဖုန်း-၀၉၂၅၄၆၁၄၀၄၈) တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးဆေးချင်း သို့မဟုတ် ဆေးနှင့်အစာမတည့်ရင်
Copyright © 2016 Hotnews Journal. All rights reserved. Developed by Bagan Innovation Technology.